May 10, 2021 - समृद्ध नेपाल
बहुमतकाे सरकारका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान !
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले आगामी बैशाख ३० गते बिहान ९ बजेभित्र बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव
फेरी जंगलमा रु’दै गरेको बे’वारि’स शिशु यस्तो अवस्थामा भेटियो !
सल्यान, सल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका नजिकैको जंगलमा शुक्रबार बिहान एक शिशु बेवारिस अवस्थामा फेला परेका छन् जंगलमा घुम्न गएका श्रीनगरका स्थानीयले रुँ दै गरेको बालक देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बालक झन्डै ६ महिनाजति उमेरका रहेको र नजिकै एउटा झोलासमेत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द थापाले बताए । आमाले बालकलाई
चामलको पिठो प्रयोग गरेर यसरी चम्काउन सकिन्छ अनुहार !
छालासँग जोडिएका कतिपय समस्यालाई घरमा नै सजिलै उपलब्ध हुने सामाग्रीबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो भान्छामा कतिपय यस्तो सामाग्री हुन्छन् जसको प्रयोग गर्न जानियो भने धेरै समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता घरेलु उपायको मुख्य फाइदा भनेको साइडइफेक्ट नहुनु हो।साथै यसको लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत पर्दैन । यस्तै सामाग्री मध्ये चामलको पिठो
नेपाली चेली अमेरिकन आर्मी रजनी योन्जनका रमाइला टिकटक भिडियो !
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिलो समयमामा एउटि नेपाली चेली निकै नैभाइरल
आँखाभरि आँसु लिँदै भनिन्: निउरो पनि बिकेन् घरमा खानेकुरा केहि छैन् सबै परिवार भोकै छम !
कोरोना विश्वभर फैलिएको छ, तर पीडा उसलाई छ जो दिनभरि मजदुर गरी खाने परिवारलाई। नत बैंकमा खाता छ नत खातामा पैसा नै जे छ त्यो हो दिनभरिको काम अनि साझ माम। हुनत संसारभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरस कुनै मानिसले गरेको काम हैन तर पनि गरिबीको रुखमुनि बसेका हरुलाई त यतिबेला न म*र्न न बाँच्न भएको
नायिका जसिताले लुकाएको लुक्स !
नायिका जसिता गुरुङले केही समय अगाडि चलचित्र आई एम ट्वान्टी वान’को छायांकन सकाइन् । यो चलचित्रमा अनुवन्धित भएपछि जसिताले सामाजिक संजालबाट आफूलाई टाढा नै बनाएकी थिइन् । यो चलचित्रको निर्माणपक्षले हालसम्म चलचित्रको कुनै पनि लुक्स सार्वजनिक गरेको थिएन । जसिताले यो चलचित्रको लागि डबिङ पनि सकाएकी छिन् । जसिता यो चलचित्रको छायांकन सकेर अर्को चलचित्र
नेपालकी पहिलो मुस्लिम हिरोइन ओशिमा भन्छिन्- समाजको ‘डर’ छैन तर !
मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले कला क्षेत्रमा लागेका मुस्लिम समुदायका नेपाली महिला विरलै भेटेकी छन्।‘भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत देशमा थुप्रै मुस्लिम महिला फिल्म क्षेत्रमा चर्चित छन्, नेपालमा भने फिल्म फेसनजस्तो खुलापन भएको क्षेत्रमा त परै जाओस्, राम्रो प्रतिभा भएका मुस्लिम महिलाले रेडियोमा समेत काम गर्न पाएका छैनन् मोहनाको अनुभव छ। पचास वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको फिल्मक्षेत्रमा
किस्ता किस्ता गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक महिना निषेधाज्ञाको तयारी !
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै एक महिना लम्बिने भएको छ । काठमाडौँमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा हाल दोस्रो हप्तामा छ । हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा वैशाख २९ गते मध्यरातबाट सकिदैछ।तर कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो क्रम मै रहेकोले काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा अवधि अझै थप हुने भएको हो । सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको
देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नुहोला, ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस् !
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला ॐ लेखि सेयर गरौं ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भय साथै यो
प्रधानमन्त्री संविधानबमोजिम स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ भने विपक्षमा १२४ र १५ जना तटस्थ रहे । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । संसदको सबभन्दा ठूलो दल